यी १३ कारणले मेस्सी भन्दा रोनाल्डो सर्वोकृष्ट | Diyopost
यी १३ कारणले मेस्सी भन्दा रोनाल्डो सर्वोकृष्ट
मा प्रकाशित 284 पटक हेरिएको
विश्व फुटबलमा पछिल्लो समय चर्चामा आउने नाम हो लियोनल मेस्सी र क्रिस्टियानो रोनाल्डो । आफ्नो पुस्ताकै सर्वकालीन महान खेलाडी मानिने मेस्सी र रोनाल्डोबीच को ‘सर्वोकृष्ट’ भन्ने बिषयमा सधै विवाद रहने गर्छ । कतिपयले रोनाल्डो त कतिपयले मेस्सी महान र सर्वोकृष्ट खेलाडी भन्ने गर्छन् ।
रोनाल्डो र मेस्सीको समर्थकहरु विश्वभर उत्तिकै रहेका छन् । यी दुईबीचको समर्थकबीच सधै उत्कृष्ट खेलाडीको बिषयमा खटपट हुने गर्छ । मेस्सी र रोनाल्डो मध्ये को सदावहार सर्वाेत्कृष्ट खेलाडी हुन त ? यदि हामीले आफ्नो भावना, मनपर्ने व्यक्ति जस्ता कुरालाई छोडेर सत्यता, तथा तथ्याङ्कमा ध्यान दियौ भने मेस्सी भन्दा पनि रोनाल्डो सर्वोकृष्ट देखिएका छन् ।
किन रोनाल्डो मेस्सीभन्दा सर्वोकृष्ट छन् त ? द फस्ट न्युजपेपरले निकालेको १३ तथ्यांक हेर्नुहोस् । जसले मेस्सी भन्दा रोनाल्डो महान खेलाडी रहेको देखाउछ ।
रोनाल्डो उनको देश पोर्चुगलका लागि महान र सर्वाेत्कृष्ट फुटबलरको रुपमा मानिन्छन् । अर्काेतर्फ मेस्सी अझैपनि म्याराडोनाको छायामा रहेका छन् । मेस्सीको नाम म्यारोडोनापछि मात्र आउने गर्छ ।
रोनाल्डोलाई हारको सामना कसरी गर्ने भन्ने कुरा राम्रोसँग थाहा छ । मेस्सी भने हारपछि सन्यास लिन्छन् । र, सन्यास फिर्ता लिन्छन् ।
रोनाल्डो मेस्सीभन्दा बजार भ्यालु बढी भएका खेलाडी हुन् । यसको कारण फुटबलमा उनको उत्कृष्ट क्षमता र उत्कृष्ट शैली हो ।
रोनाल्डो क्रस बल र कर्नरमा सधै खतरनाक र बिपक्षिको टाउको दुखाई बन्छ किनकी उनको उत्कृष्ट हेडिङमा गोल गर्ने क्षमता छ । मेस्सी एयर बलमा खतरनाक छैनन् किनकि उनको छोटो उचाइ र औसत हेडिङको कारण ।
पेनाल्टीमा मेस्सीभन्दा रोनाल्डो उत्कृष्ट छन् । विपक्षको दबाबमा हुँदा उनी पेनाल्टी गोल गर्न सक्षम छन् । मेस्सी भने टिम दबाबमा हुँदा पेनाल्टीमा गोल गर्न विश्वसनीय छैनन् ।
मेस्सीभन्दा रोनाल्डो तिव्र गतिका खेलाडी हुन् । हामी कुनै समयमा देख्न सक्छौ कि रोनाल्डोले आफ्नो तिव्र गतिले विपक्षी डिफेन्डरलाई सहजै बिट गरेका छन् । यता, मेस्सीसँग उत्कृष्ट ड्रिभलिङ गर्ने क्षमता छ तर मेस्सीसँग रोनाल्डोको जति एकैनासको गति छैन ।
रोनाल्डो मेस्सीभन्दा पनि पूर्ण खेलाडी हुन् । रोनाल्डोसँग दाँया, बाँया खुट्टा र हेडिङ बलियो छ । तर मेस्सीसँग भने मात्र बाँया खुट्टा बलियो छ ।
रोनाल्डोसँग उत्कृष्ट नेतृत्व गर्ने शैली छ र कसरी टिमलाई सम्हाल्ने र दबाबका बाबजुत पनि टिमलाई उपाधि जित्न कसरी उत्प्रेरणा जगाउने सबै थाहा छ । मेस्सीको अवस्थामा भने दबाबसँग हार मान्ने र मैदानमा पूर्ण रुपमा मौन हुन्छन् ।
रोनाल्डोले मेस्सीको तुलनामा बढी अन्तराष्ट्रिय गोल गरेका छन् । रोनाल्डोले ८५ गोल गरेका छन् भने मेस्सीले ६५ गोल गरेका छन् ।
रोनाल्डो च्याम्पियन्स लिगमा सर्वाधिक गोलकर्ता हुन् उनले १ सय २० गोल गरेका छन् । यस्तै मेस्सीले भने रोनाल्डोलाई पछ्याउदै १ सय ३ गोल गरेका छन् ।
रोनाल्डोले देशका लागि एक मुख्य अन्तराष्ट्रिय उपाधि युरो कप जितेका छन् तर मेस्सीले देशका लागि ठुला ट्रफी जित्न सकेका छैनन् ।
रोनाल्डोले फरक ४ वटा क्लब र ४ वटा लिगमा आफुलाई साबित गरिसकेका छन् । जबकि मेस्सीले आफ्नो करियरमा एउटा क्लब बार्सिलोनाबाट मात्र खेलेका छन् ।
रोनाल्डोले आफ्नो क्लब करियरमा मेस्सीले भन्दा धेरै गोल गरेका छन् । रोनाल्डोले ६ सय ६० गरेका छन् भने मेस्सीले आफ्नो क्लब करियरमा ६ सय २४ गोल गरेका छन् ।